Home Somali News Falastiin oo xubin ka noqotay Maxkamada Caalamka!
Dowlada Falastiin ayaa Arbacadii shalay markii ugu horeysay xubin rasmi ah ka noqotay Maxkamada Caalamiga ah ee danbiyada dagaal oo fadhigeedu yahay The Hague, Holland.
Dowlada Falastiin ayaa 2dii bishii Janaayo saxiixday inay xubin ka noqoto Maxkamada Caalamka iyadoo saxiixday heshiiskii Rome ee maxkamadaasi lagu dhisay, waxaana loo ogaalay shalay inay maxkamada kusoo biirto.
Arrintan ayaa qeyb ka ah guulaha siyaasadeed oo ay Falastiiniyiinta gaareen, waxayna doonayaan in danbiyada dagaal oo ay galaan ciidamada Isra’iil ay baarto maxkamada Caalamiga ah.
Isra’iil ayaan iyadu saxiixin heshiiskii Rome xubina kama aha dalalka hoostaga maxkamada Caalamiga ah, balse maxkamada waxay awood u leedahay inay baarto danbiyada ka dhaca dhulka dalalka xubnaha ka ah sida Falastiin.
Dowlada isra’iil ayaa horey si weyn uga soo horjeeday in Falastiin ku biirto maxkamada Caalamiga ah, waxayna ku hanjabeen inay joojin doonaan lacagta canshuurta ah ee Falastiin leedahay oo uu maamulka Isra’iil soo aruursho.
Kadib doorashadii Isra’iil markii dib loo doortay Benjamin Netanyahu oo sheegay inuusan marnaba ogolaan doonin maamul iyo dowlad u gaar ah Falastiin, ayuu go’aansaday maamulka Falastiin inuu xooga saaro dhameystirka kamid noqoshada maxkamada Caalamiga ah.
Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas ayaa durbadiiba maxkamada Caalamiga ah ka codsaday inay baarto danbiyadii dagaal ee ka dhacay dhulka Falastiin laga soo bilaabo bishii June 2014, xiligaasi oo ay Isra’iil in ka badan 2200 qof ku xasuuqday marinka Gaza.
Xisbiga Xamaas oo xiligan maamulka kula jira xisbiga Fatax ee Maxamuud Cabaas ayaa isagu kasoo horjeeday in Falastiin xubin ka noqoto Maxkamada Caalamiga, taasi oo uu uga baqayey in xisbigaasi laftiisa dacwado ay kusoo oogto maxkamada.
Hase yeeshee waxaa la sheegay inay wakhti dheer qaadan doonto inta ay maxkamada Caalamiga ah baaritaan ka bilaabeyso Falastiin, welina ma jirto dacwad ama baaritaan rasmi ah oo ay maxkamadaasi ku bilowday ciidamada Isra’iil.